Naqshadaynta Samsung Galaxy S21: Raadiyayaashii ugu horreeyay waa la sifeeyaa | Androidsis
Naqshadeynta naqshadda Samsung Galaxy S21
Qoyska Samsung ee Galaxy S waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna sarreeya. Iyo, inkasta oo ay wali jiraan bilo yar oo Samsung Galaxy S21 ah inuu suuqa ku dhufto, haddana waxyar oo yar ayaan helaynaa macluumaad ku saabsan qalabkan muddada dheer la sugayay.
Waxaan horay u aragnay marka ugu horeysa calaamadaha qalabka, marka lagu daro suurtagalnimada taas terminaalka xiga wuxuu u taagan yahay imaatinka S-Pen si ugu dambayn loo dhammeeyo qoyska Qoraalka. Haddana waxaan ku tusi doonnaa sida ugu macquulsan naqshadda Samsung Galaxy S21.
Tani waa #Samsung #GalaxyS21!
Kuwani waxay muujinayaan naqshadda Samsung Galaxy S21
Sida aad ku aragto sawirka hogaaminaya xariiqyadan, khabiirka caanka ah ee caanka ah @OnLeaks wuxuu adeegsaday akoonkiisa Twitter si uu u daabaco ereyada ugu horreeya ee aan ku arki karno naqshadda suurtagalka ah ee Samsung Galaxy S21. Iyadoo la tixgelinayo sharafta uu isticmaalehani leeyahay, waxay u badan tahay in xubinta xigta ee qoyska Samsung Galaxy S ay ku faani doonto dhinacan.
Maskaxda ku hay in Galaxy S21 ay u badan tahay lama soo gudbin ilaa Febraayo ama Maarso 2021, sidaa darteed xitaa haddii ay tahay naqshad dhab ah, way ku kala duwanaan kartaa maadaama kooxda ka dambeysa horumarinta terminalkan ay abuurayaan fikrado kala duwan illaa moodeelka saxda ah laga helayo.
Wixii aan ka arki karno, Samsung Galaxy S21 wuxuu lahaan lahaa a naqshad aad u la mid ah kii ka horreeyay dhinaca hore, halkaasoo kamaradda lagu dhex dhisay shaashadda ay tahay kala duwanaanshaha weyn. Dhinaca kale, xagga dambe waxaan ku aragnaa isbeddel ku yimid qaybta kamaradda, oo hadda sii dheereyneysa soo bandhigidda muuqaal miyir qaba.
Intaas waxaa sii dheer, waxay umuuqataa in lagu dhajiyay jirka aaladda, sidaas darteed farqigaas waa la baabi'in lahaa iyadoo keeneysa in taleefanka uu gariirmo marka aan dul dhigno dusha sare iyadoo shaashaddu kor u socoto Sidaan kuu sheegnay, waxaan wajaheynaa abaalmarin laga yaabo inaysan noqon naqshada ugu dambeysa ee Samsung Galaxy S21, laakiin waxay noo ogolaaneysaa inaan helno fikrad ah ujeedka soo-saaraha Kuuriya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Naqshadeynta naqshadda Samsung Galaxy S21
Sida loo isticmaalo raadinta horumarsan ee Telegram